Q18aad Sir Dahsoon Iyo Sadaxeeye Jaceyl “Sheeko Aad Iyo Aad U Xiiso Badan” – Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
January 10, 2013 January 10, 2013 21
Waa sheekadii xiisaha badneyd ee sir dahsoon iyo sadaxeeye jaceyl qeybteedii 18aad………
Waxaannu qansaxle uga baxney dhanka koonfureed, dul iyo dhagax adag baannu sii marney, jillab iyo dhir kale baa lugaha kaa xaganaya, saacad markaannu soconney ayaannu ku soo baxney jees meel daggan, cumar baa waraystay oo waydiiyey halka reerkaan ku soconnaa dagganyihiin, iyaguna wayba noo farmuuqeen oo waa aqal soomaligaa halkaa ka dhisan baynagu yidhaahdeen.
Cabsi baa I gashey aniga waliba mid saaÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ida, wadnihii baa I boodboodey, waxaannu ku sii soconnaa gurigii naloo tilmaamey. Intaanan gurigii gaarin baannu dhanka galbeed ka maqalnay xamxam iyo hadal hoose oo u ekaa mid dumar. Waannu ku leexannay mase waxaaba fadhiya geed halkan ah ayaan iyo gabar kale oo iska sheekaysanayey cawskii geedka ka baxayna ku dul fadhiyey oo dooggii indhaha ku qaboojinaya.
Hal mar ayaa dhidid iga soo boodey sida nin maantoo dhan ordayay, wadnuhuna garaacii badiyey, Ãƒâ€šÃ‚Â sidaa ay hablihii noo soo jeedaaliyeenba waxaa isku dhacey indhaygii iyo kuwii ayaan, hal mar baan ka dareemay inaysan mahadin aragayga hoosna iiga jeesatay, waan farxay markaan arkay araggeeda oo runtii waxaa ku ildoogsadey indhaha, waxay aheyd qof aan qalbigayga ka tiri waayey kuna qorneyd meel aad iyo aad u fog. Anigu maba hadline cumar baa bariidiyey, gabadhii kale baa bariidadii ka qaaddey, ayaan waxay eegaysaa hoos. Ma rabto inay isoo fiiriso. Waxayba nacaysaa araggayga oo Allow yaa kaa hor dhaqaajiyay taagan tahay.
Intaan raganimo iska dayey baan hablihii wada salaamey oo idhi ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œayaan dhulka maxaa kaaga lumeyÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â iimaysan jawaabin. Ãƒâ€šÃ‚Â Cumar oo durbadiiba dareemay ayaantu tay tahay ayaa gabadhii kale la hadlay oo ku yidhi walaal waxbaan rabey inaan ku yara waydiiyo ee mayna soo kicin kartaa. Iyaduna haa fudud bay inta ku tidhi horey ka kacdey oo dhankaa ula dhaqaaqdey cumar.
Waan ku farxay indheer garadnimadiisaÃƒâ€šÃ‚Â iyo inuu kasho I siiyay aan kula hadlo tan qaaddey qalbiga. Waan fariistay waxaana na dhex maray hadalladaan:
Aniga: gacaliso ayaan ma fiicantahay kawaran caafimaadka?
Ayaan: ereygaa mar danbe hadaad I dhahdid waan kaaga kacayaa meesha, araggaaga ayaan dhibsanayaa wiilyohow wixii aan wanaag kuu galana adigaa burburiyey ee maxaa ku keenay meeshan ood iiga daba ordaysaa ma inaanan ku ogeyn baad I moodaysaa? iyaa?
Adaan dumarka oo idil
Inta dunida joogtoo
Afrikiyo oroobba leh
Alla kaa ishaartaye
Inaan daacad kuu ahey
Dadka kuugu jecelahay
Adna dabinno wayniyo
Igu habayso dacar kulul
Daw miyaa ayaaney?
Ruuxee la dolondoley?
Yaa diley kal gacalkii?
Bal u fiirso derejada
Maxaa duurkan qalaxaa
Duddadaan I keenoon
Kuu daba ordaayaa?
Danqashiyo il naxariis
Igu daawo gabadhyahay
Duruuftiyo dhibkaan iyo
Daaduunka aan qabo
Waxa aan la diifee
I dareen ayaaney!
Ayaan: ama hees ama geeraar tiri wax ku anfaca aan kuu sheego barkhadoow, mar danbe agtayda yaanan kugu arag haddii kale waawareey baan oranayaa, iddaa fadlan ammaan isii kuma jecli, haddaan shalay ku jeclaa maanta ku nacay. Ma doqon baad tahay maxaad ii daba ordaysaa sownigan ku leh ku nacay! Kuma rabo waad ogtahay sababtaan kuu nacey adaa iskey nacsiiyey ma doonayo inaan kuu calaalo war iyo dhammaantiis nabadeey hana isoo raacin haddaad Ilaahey taqaanid!
Ma xasuusto goor ay kacday, waxaan ka war helay anigoo kaligay oynaya oo Ãƒâ€šÃ‚Â ilmaynaya sia xowli ah, inaan is dilo baa ila fiicnaatay! Maxaan galabsaday akhriye?….
Waxaa arkay cumar halkay howshu marayso, wuxuu ka daba orday ayaan, oo uu la hadlay iskuna dayey inay maskaxda ii dajiso, way ka diidey waliba si adag kuna tidhi adiga ayaa keenaye dee meeshad ka keentay gee aniga waxba iskuma nihin kaase Ãƒâ€šÃ‚Â Allahaa Alle haduu yahay iska key daa isaguna ha iska key daayo.
Cumar wuxuu iisoo laabtey isagoo quus ah, anigoo meeshii la I saraa aysan dhiig lahayn, naxdin baan la jiifsadey geedkii ay iiga dhaqaaday hoostiisii, hurdana magaline inta dhabarka u jiifsaday cirka u jeediyey indhihii, waxaan ku dhaygagay daruuraha, aad iyo aad baan u fikiray wuxuuna fikrikaygu isku shareeray samada. Cumar markuu ila soo istaagey buu wuxuu yiri barkhadoow waa adduun! Ee inaga kici meesha saaxiib.
Markaasaan xaqiiqdsaday inay isagana waxkasta ka diiddey markaasaan idhi anoo si u dawakhsan:……………..
Akhriso Oo Wax Badan Ka Ogoow Sideed Walxaato Oo Kamid Ah Fadliga Bisha Ramadaan.
KaLaFoGe June 25, 2014 November 20, 2016
Wax Badan Ka Barro Saddex Nooc Oo Sharaabka Ka Mid Ah Ayaa Kor U Qaada Fariidnimada Qofka..
Video: Dhalinyaro Soomaali ah oo dhacdo Naxdin iyo Murugo leh ku qabsatey Xeebaha Dalka Australia!!
KaLaFoGe May 2, 2014